15 drawers from cabinet for A4 or B4 sized paper with circle handle style. A4,B4 စာရွက်စာတမ်းများအပြင် ကဒ်များပါထည့်နိုင်သည့် စက်ဝိုင်းသဏ္ဍန်လက်ကိုင်ပါ အံဆွဲ (၁၅)ခုပါသော အံဆွဲကြီး။ Size: W38*D45.7*H132 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၃၈၊ အနံ ၄၅.၇၊ အမြင့် ၁၃၂ စင်တီမီတာ
Sliding glass door cabinet with2adjustable shelves and keylock including base. ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်စင် (၂)စင်နှင့် သော့ခတ်နိုင်သည့် ဘေးဆွဲမှန်တံခါးဗီရို။ အောက်ခြေပါဝင်သည်။
HD-100 HANGEN ကဲလားတံခါးနှင့် နံရံကပ်စတီးဗီဒိုအရှည်
ကဲလားတံခါးနှင့် နံရံကပ်စတီးဗီဒိုအရှည် ၁၀၀ စင်တီမီတာအတိုင်းအတာ – အလျား ၁၀၀ * အနံ ၃၀ * အမြင့် ၃၅ စင်တီမီတာ
HD-40 HANGEN ကဲလားတံခါးနှင့် နံရံကပ်စတီးဗီဒိုငယ်
နံရံကပ်စတီးဗီဒိုအရှည် ၁၀၀ စင်တီမီတာအတိုင်းအတာ – အလျား ၁၀၀ * အနံ ၃၀ * အမြင့် ၃၅ စင်တီမီတာ
HD-80 HANGEN ကဲလားတံခါးနှင့် နံရံကပ်စတီးဗီဒိုအလတ်
ကဲလားတံခါးနှင့် နံရံကပ်စတီးဗီဒိုငယ် ၄၀ စင်တီမီတာအတိုင်းအတာ – အလျား ၄၀ * အနံ ၃၀ * အမြင့် ၃၅ စင်တီမီတာ
HOD-40 HANGEN ကဲလားတံခါးနှင့် နံရံကပ်စတီးဗီဒိုငယ်နှစ်စင့်
LB-60 Showcase 60cm LB-60
Show case 60 cm. with open space.
LB-90 Showcase 90cm LB-90
Show case 90 cm. with upper open space.